ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာပြီးမြို့ကြီးများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှစားနပ်ရိက္ခာစွန့်ပစ်မှုများတိုးများလာနေသည်။ နှစ်စဉ်တန်ချိန်သန်းပေါင်းများစွာသည်ကမ္ဘာအနှံ့အမှိုက်များထဲသို့ပစ်ချနေကြသည်။ ကမ္ဘာ့အသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့များ၊ အသားများနှင့်ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာများ၏ ၃၀% နီးပါးကိုနှစ်စဉ်စွန့်ပစ်သည်။ တိုင်းပြည်တိုင်း၌စားနပ်ရိက္ခာစွန့်ပစ်မှုသည်ကြီးမားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြproblemနာဖြစ်လာသည်။ လေ၊ ရေ၊ မြေဆီလွှာနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေသည့်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ မီသိန်း၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောထုတ်လွှတ်မှုစသည့်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်ရန်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေ။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တန်ချိန် ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနှင့်ညီမျှသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမြေဖို့ရန်အတွက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များနှင့်ရေပေါ်ဖုန်မှုန့်များထွက်ရှိသောမြေဖို့ခြင်းထဲသို့ပစ်ချသည်။ အမှိုက်ပုံအတွင်းထုတ်လွှတ်သောစွန့်ပစ်ရည်ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်ဒုတိယလေထုညစ်ညမ်းခြင်း၊ မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်မြေအောက်ရေညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။
သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ စီရီရယ်၊ ပေါင်မုန့်၊ ကော်ဖီခြံများ၊ ဥခွံများ၊ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်သီးခြားဆွေးအေးဂျင့်ဖြစ်ပြီးအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အစားအစာမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင်ဓာတုဒြပ်စင်များဖြစ်သည့်ဓာတ်၊ ကလာပ်စည်း၊ ပရိုတိန်း lipids နှင့်အော်ဂဲနစ်ဆားများပါ ၀ င်ပြီး N, P, K, Ca, Mg, Fe, K စသည့်သဲလွန်စဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သည်။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးကောင်းမွန်သော ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှု၊ အစိုဓာတ်မြင့်မားမှုနှင့်အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုမြင့်မားသည်။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်အစိုဓာတ်မြင့်မားမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆနိမ့်ကျသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောကြောင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအမြောက်အများထည့်သွင်းအသုံးပြုသောအေးဂျင့်နှင့်ရောစပ်ရန်အရေးကြီးသည်။
အစားအစာမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများမြင့်မားစွာရှိသည်။ ရေနံစိမ်းပရိုတိန်း ၁၅% - ၂၃%၊ ၁၇% အတွက်အဆီ - ၂၄%၊ ၃% - ၅%၊ Ca - ၅၄%၊ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် - ၃% - ၄%၊ စသည်တို့
မြေဖို့ရန်အရင်းအမြစ်များအသုံးချနှုန်းနိမ့်ကျခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေပါသည်။ လက်ရှိတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအချို့သည်ခိုင်မာသောအစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကုသမှုစနစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအများအားဖြင့်ဆွေးနှင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေမှုန့်ခြင်းဖြင့်ကုသပြီးနှစ်စဉ်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာတန်ချိန် ၅ သန်းခန့်ထုတ်လုပ်သည်။ ယူကေရှိအစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းခြင်းဖြင့်နှစ်စဉ်တန်ချိန်သန်း ၂၀ ခန့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဆွေးကိုအမေရိကန်မြို့ကြီးများ၏ ၉၅% တွင်အသုံးပြုသည်။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းသည်ရေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းအပါအ ၀ င်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေနိုင်ပြီးစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များလည်းများစွာရှိသည်။
ရေသည်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၇၀% မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အစားအသောက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကြိုတင်ကုသမှုကိရိယာသည်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကုသရာတွင်ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ရေဆိုးစနစ်စနစ်ကျွေးမွေးခြင်းစနစ် Automatic အလိုအလျောက်စီစစ်စနစ် Sol အစိုင်အခဲ - အရည် Separator ရေနံ - ရေSeparatoràသင်္ဘောကျင်းတွင်ပါဝင်သည်။ အခြေခံစီးဆင်းမှုကိုအောက်ပါအဆင့်များခွဲနိုင်သည်။
၁။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ရေများလွန်းသောကြောင့် ဦး စွာရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပြုလုပ်ရမည်။
သတ္တု၊ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်၊ စက္ကူ၊ အထည်စသည်တို့ကဲ့သို့အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအမျိုးအစားခွဲခြင်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
၃။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဖြိုခွဲခြင်း၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်အခြောက်ခံခြင်းအတွက်ဝက်အူပုံစံအစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲစက်ထဲသို့ ခွဲ၍ ထည့်သွင်းသည်။
4. ညှစ်ထားသောအစားအစာအကြွင်းအကျန်များသည်အစိုဓာတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါပိုးမွှားများဖယ်ရှားပစ်ရန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အခြောက်လှန်းခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ခြင်းပြုလုပ်သည်။ ဆွေးရရှိရန်လိုအပ်သောအစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ပြည့်စုံမှုနှင့်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို belt တန်ဆာကွန်တာထဲသို့စက်ခါးပတ်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်သည်။
၅။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှထုတ်ယူထားသောရေသည်ရေနှင့်ရောစပ်သောအရာဖြစ်ပြီး၊ ရေနံခွဲစက်ဖြင့်ခွဲထားသည်။ ကွဲကွာသောဆီသည်ဇီ ၀ ဒီဇယ်သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဆီများရရှိရန်နက်ရှိုင်းစွာပြုပြင်သည်။
ကစော်ဖောက်ခြင်းအကြံပေးအဖွဲ့ ရိုးရာ stacking ဆွေးနည်းပညာကိုအစားထိုးမြင့်မားသောအပူချိန်အေရိုးဗစ်ကစော်ဖောက်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြု။ အပြည့်အဝပူးတွဲအကြံပေးအဖွဲ့တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တံခါးပိတ်အပူချိန်မြင့်မားစွာနှင့် composting ပြုလုပ်သော tank သည်အရည်အသွေးမြင့်သောဆွေးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုပိုမိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတည်ငြိမ်စေသည်။
In-tank compost insulator တွင်လည်းအပူချိန်ထိန်းညှိမှုသည် composting ပြုလုပ်ရာတွင်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သည့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများအလျင်အမြန်ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းသည်အဏုဇီ ၀ သက်ရှိများအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန်အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိသည်။ ပေါင်းစပ်မျိုးစေ့များနှင့်အပင်များမလှုပ်နိုင်အောင်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပွားသောအဏုဇီ ၀ သက်ရှိများဖြင့်အစပျိုးခြင်း၊ အစေးပစ္စည်းများဖြိုခွဲခြင်း၊ အာဟာရဓာတ်များကိုထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ အပူချိန်ကို ၆၀-၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်များအားပြုပြင်ရန်အတွက်စည်းမျဉ်းများ။ In-tank compost သည်အလျင်မြန်ဆုံးပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်ပြီး ၄ ရက်အတွင်းအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အကြာတွင်ဆွေးသည်အနံ့မရှိသည့်အပြင်သန့်စင်ပြီးအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကြွယ်ဝသောအာဟာရတန်ဖိုးကိုမျှတစေသည်။
composter မှထုတ်လုပ်သောဤအနံ့မရှိသော aseptic အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်မြေများကိုသိမ်းဆည်းရုံသာမကစီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
Granular အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ ဓာတ်မြေသြဇာထောက်ပံ့ရေးနည်းဗျူဟာများတွင်ကမ္ဘာ့အဓိကအခန်းကဏ္ an မှပါ ၀ င်သည်။ အထွက်နှုန်းအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုတိုးတက်စေရန်သော့ချက်မှာသင့်လျော်သောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအနည်ကျစက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Granulation သည်သေးငယ်သောအမှုန်များအဖြစ်သို့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်၊ ၎င်းသည်ပစ္စည်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကိတ်မုန့်ကိုတားဆီးခြင်းနှင့်စီးဆင်းမှုဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပမာဏအနည်းငယ်ကိုအသုံးချခြင်း၊ တင်ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည်တို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ကုန်ကြမ်းများအားလုံးကို rounded အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ granulation စက်မှတဆင့်။ အမှုန့်များသည် ၁၀၀% အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးအော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှုသည် ၁၀၀% အထိမြင့်နိုင်သည်။
အကြီးစားလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်စျေးကွက်ကိုအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောအမှုန်အရွယ်အစားသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာများထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ 0.5mm-1.3mm, 1.3mm-3mm, 2mm-5mm ။အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏ granulation သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းများအတွက်ခွင့်ပြုသည့်အပြင်ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်အတွက်သတ္တုဓာတ်များကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးနည်းလမ်းအချို့ကိုပေးသည်။ ပေါင်းစပ်မျိုးစေ့များနှင့်ရောဂါပိုးမွှားများနှင့်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုလူသိများသည်။ တိရစ္ဆာန်ချေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့တွင်နိုက်ထရိုဂျင် (N) ၄.၃ ဆ၊ ဖော့စဖရပ် ၄ ကြိမ် (P2O5) နှင့်ပိုတက်စီယမ် ၈၂.၂ ဆပိုများပါသည်။ granular ဓာတ်မြေသြဇာ humus အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်မြေဆီလွှာ၏ရှင်သန်နိုင်မှုကိုတိုးတက်စေ, များစွာသောမြေဆီလွှာကုန်ထုတ်စွမ်းအားညွှန်းကိန်းတိုးတက်လာသော: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဓာတု, microbiological မြေဆီလွှာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စိုထိုင်းဆ, လေ, အပူစစ်အစိုးရနှင့်သီးနှံအထွက်နှုန်း။
Rotary စည်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အအေးစက် မကြာခဏအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစဉ်အတွင်းအတူတကွအသုံးပြုကြသည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများထဲမှရေပါဝင်မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီး၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်သည် granules တွင်အာဟာရများဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမှုန်အင်အားတိုးမြှင့်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်၎င်းမှပြီးစီးသောအရည်အချင်းမရှိသည့် granular ဓာတ်မြေသြဇာများကိုခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည် rotary စည်စိစစ်စက်။ အရည်အသွေးပြည့်မှီသောအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာများကိုထုပ်ပိုးမည်ဖြစ်ပြီးအရည်အချင်းမပြည့်မှီသော granular ဓာတ်မြေသြဇာများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပြန်လည်ပို့သည်အော်တိုထုပ်ပိုးစက်.
စားနပ်ရိက္ခာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်စီးပွားရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပေါ်စေပြီးမြေဆီလွှာကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပြီးတိုက်စားမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးရေအရည်အသွေးကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းနိုင်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ဇီဝလောင်စာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုထားသောအစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်လျှော့ချနိုင်သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာအပေါ်မှီခို။
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်မြေဆီလွှာအတွက်အကောင်းဆုံးအာဟာရဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပင်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောနိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်အာဟာရပြည့်ဝသောအပင်များအပါအဝင်အပင်အာဟာရဓာတ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပင်ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါအချို့ကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကဖန်းဂတ်စ်များနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများလိုအပ်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။အရည်အသွေးမြင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဒေသခံလယ်ယာမြေများနှင့်အများပြည်သူနေရာများတွင်ပန်းပြသခြင်းများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူများကိုတိုက်ရိုက်စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်စေနိုင်သည်။